Cade Muuse oo si cad oo bareer ah u rartay biro scrab ah oo yaalay xerada Booliska Garowe mar uu halkaasi u tagay in uu booliska u khudbadeeyo.
Garowe: Ciidamada Daraawiishta DGPL oo ka gadooday in ay aadaan muqdisho
Garowe: Qiima dhimistii uu Cade Muuse ku dhawaaqay oo noqotay hal bacaad lagu lisay
Madaxwaynaha DGPl Gen: Cade Muuse ayaa sabditii [June 30, 2007] booqasho ku tagay xerada Booliska Garowe halkaasi oo uu khudbad ka jeedinlahaa madaxwaynuhu hase ahaatee isku badashay khudbadii uu rabay in uu madaxwaynuhu jeediyo dhako kale.
Madaxwaynaha ayaa isugu yeeray dhamaan Ciidanka Booliska qaybtiisa Garowe si ay xaadir ugu noqdaan xerada isla markaana uu madaxwaynuhu rabay in uu Ciidanka kala hadlo dhanka amaanka iyo sidii wax looga qaban lahaa iyo waliba bixinta mushahaarooyinka mudada dheer ka maqan ciidamada.
Ugu horaynaba madaxwaynuhu markii uu soo galay xeradii ayuu markiiba hadalo loo arkay gaf ah u jeediyay Ciidamdii halkaasi diyaarka ku ahaa waxana uu yiri idinka ma mudnayn in aan idiin imaado, dhibka dhacaya idinka ayaa ka mas'uul ah, waxna kama qabadaan,Hadii danbiile halkaas maro ma qaban kartaan, tuug ma raadinkartaan, iyo hadlo kale.
Hase ahaatee dood dheer iyo falaaaqayn kadib ayuu madaxwaynuhu farta ku fiiqay Biro isugu jira kuwo duugoowbay oo ay baaba'een baabuurtii kuwaasi oo ay lahayd ama ay ka tagtay Dawladii hore ee Somalia ilaa shalayna yaalay xerada oo aan cidina hunguriyayn ahaana kuwo meel banaan iska yaalay oo xerada dhexdeeda ah, Markii uu madaxwaynuhu Ciidankii waydiiyay waxa ay yihiin birahakani ayaa loogu jawaabay in ay yihiin Biro ay lahayd dawladii hore waxana uu yiri waaba hanti meel iska taalee hala qaado oo meesha halaga nadiifiyo.
Hadalba kama danbayn isla daqiiqadii ayaa waxaa soo galay xeradii baabuur wiish ah iyo kuwo kale oo ah iska rogooyin kuwaasi oo dhamaan daabulay birihii kharaabka ahaa ee meesha yaalay.
Si kastaba xaalufinta degaanka ee ay ku kacayso Dawlada uu madaxwada ka yahay Cade Muuse ayaa hadana waxay u soo dhigatay rarida biraha kharaabka ah horary ayay muran wayni uga taagnaa dhagaxan la raro, sidoo kale waxaa jira muranka la xiriira xoolaha, iyo xaalufka lagu hayo Biyaha Badda oo ah mid taagan oo aan dhamaad laahayn.
Madaxwaynaha DGPL Gen: Cade Muuse ayaa xili Go'an u qabtay in uu ahaan doono qiimaha sarifka Dollarka deegaanada puntland hal sicir, kaasi oo ay waxba ka soo naasacadaan waayeen hore ayuuna cade muuse qabtay wakhti kama danbaysa oo ay ku jaan gooyna doonaan sarifka lacagta qalaad kaasi oo qiimihiisa ay dawladu ku sheegtay 16 sh.so. ah
Si kastaba waxba kama naasa cadaan hadalkii Cade Muuse waxaana loo qaatay ruwaayad uu madaxwaynuhu ku hamiyayo ama uu alifay taasi oo ku dhamaatay guul daro maadaama Go'aankiisii madaxwayne nimo uu noqtay mid ay waxba ka socon waayeen.
Qiimaha sarifka Lacagta qalaad oo sii siqaya marba marka ka danbaysa ayaysan hadana jirin cid wax ka qabatay ilaa iyo xiligan dad badan oo dan yar ah ayaan awoodin in ay helaan waxyaabaha noloshooda muhiimka u ah maadaama aysan kaafin karin noloshooda.
Qiimaha sarifka ayaa isu taagay laba milyan oo xiran waxaana hawada galay ama kor u kacay qiimihii lakala siisan jiray raashinka mana jirto ilaa iyo hada cid isku dayday in ay arimahaasi wax ka qabtaan dadbadan oo ku dhaqan deegaanda Puntland ayaa cabsi wayn ka muujinaya sicir bararkan iyaga oo sheegay in hadii ay sii socoto kor u kaca raashinak iyo dollarku ay puntland ahaan doonto meel laga kala hayaamo oo looga safro deegaano kale sida Somaliland oo uusan sarifka Dollarku ka kicin deegaanadaasi oo ay dawlada halkaasi ak jirtaa ay si wayn u xakamaysay qiima Go'ana ay u samaysa.
Si kastaba Madaxwayne Cade Muuse ayaa ku fashilmay siyaasadii qiimaha sarifka dollarka waxaana loo aanaynayaa sare u akcaya ku yimdi in ay dawladu mas'uul ka tahay maadaama ay dawladu keentay dalka makiinadaha sameeya Lacagaha Falsada ah kuwasi oo si xawli ah u soo gala suuqyada puntland keenana sixir barar dhaqaale iyo mid bur burin ah xaga dalka.
Samaynta lacagaha been abuurka ah ayaa ah kuwo ku badan Puntland waxaana lagu sameeyaan meelo badan oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Bosaso, Galkacyo, Qardho, Camro, iyo Garowe.
Xaalka qoysas badan oo reer puntland ah ayay ku adkaan doontaa hadii uu sidan ku sii kaco qiimaha lakala siisto sarifka dollarka iyada oo aysan jirin xakamayn ka imaan kartaa dawlada uu madaxda ka yahay Cade Muuse oo u muuqda mid un u gaarsanaya dollarka oo kalaiya islamarkasina aysan u muuqan masuuliyad darada uu ku dhaqmayo iyo sida uu Madaxawynuhu u baabi'inayo dalkisa hadii ay dhacdo barakac wayn oo ku yimaada dadwayaha ayuu Cade Muuse ka gali doonaa dalkiisa baal mugdi ah isaga oo hada isku haysta hal il tii kalena ay sii dhacayso waxana uu ahaan doonaa madaxwaynihi ugu horeeyay oo dadkiisa bara kiciya una hayaamiya dallal kale.
Garowe: Ciidamada Daraawiishta DGPL oo ka gadooday in ay aadaan muqdisho.
Ciidanka Daraawiishda DGPl oo ah ciidnaka ugu awooda badan ayaa si wayn uga horyimid heshiiskii ay wada gaareen Madaxda ka socota DFKGS iyo kuwa DGPL kaasi oo ahaa in ay dawlada Somalia qaadan doonto ilaa 4000 kun oo ciidamo reer puntladn ah kuwasi oo la gayndoono magalaooyinka Muqsisho iyo Baydhabo.
qaar ka mid ah Ciidamada Daraawiishda kuwooda ugu madaxsan oo nala soo xiriiray kana gaabsaday in magacyadooda la shaaciyo ayaa sheegay in ay tahay waxba kama jiraan qoraalada Falsada ah ee ay kala saxiixanayaan waana sida loo sameeyo lacagaha Falsada ah oo kale ayaa tana qalin falsa ah logu duugay.
Mid ka mid ah Madaxdaasi ayaa qiray in Ciidan ku sugan magalooyinkiisii ooo aan mudo 8bilood ah wax mushahaar ah qaadan uusan ku haboonayn in hadana la yirtaahdo meel kale ha loo bakhooliyo.
Si kastaba Ciidamada Daraawiishta DGPL ayay ka muuqataa xanaaq iyo caro ku aadan in loo duuliyo Muqdisho iyo meelo kale kuwaasi oo ay gabi ahaanab ay si wayn uga soo horjeedaan.
lama garanayo sababta keentay in uu dhaco heshiis ciidamo loogu geeynayo Muqdisho iyada oo ay muqdisho ku sugan yihiin ciidamo African ah oo oo Nabad ilaaliyayaal ah iyo kuwo kale oo Ethiopian ah kuwaasi oo cawinaya ama gacan siinaya kuwa dawalda Somalia.